Raharaha ondana Linen "voasarimakirana mavokely" - Moi Mili
Home > Raharaha ondana lony "volomparasy mavokely"
Raharaha ondana lony "volomparasy mavokely"
Ny ondana tany am-boalohany dia manarona Moimili amin'ny aloky ny mavokely mavokely dia mety ho haingo mahafinaritra tsy ho an'ny efitrano an'ny ankizy ihany, fa ho an'ny interiors hafa. Lavorary toy ny fanampin'ny lay na lay. Ny ondana dia vita amin'ny rongony rongony tsara, zippered.
Ilay tranga ondana dia vita amin'ny lamba rongony kalitao, vita tsara, misy zippered. Hita amin'ny loko sy volavola maro izy io mba hampitovina ny ao anatiny. Ny pillowcases dia azo vidina mitokana na miaraka amin'ny sima antiallergic na carte de elo. Ny famenoana toy izany dia hiantoka antsika ny toerana marina amin'ny hazondamosina mandritra ny fitsaharana.
Suhu fanasana: hatramin'ny 30 ° C. Lehibe 40 x 40 cm.
Fitaovana: landihazo, landihazo madio, ekolojia, malefaka, lamba tontolo ekolojia, kindertag
Default Title - PLN 69.00 PLN